I-Semalt: Isibonelo Somthetho Wokulwa Negaxekile Ongakubiza U-$ 10 Million E-Canada
I-Canada yenze umthetho we-anti-spam ngosuku lweCanada ngo-2014. Abanikazi bamabhizinisi manje bakhokhelwa imali eyizigidi ezingu-10 zamaRandi ngenxa yokungavumelani nomthetho. Kubathumeli ngabanye abagaxekile, imali i-$ 1 million.
IsiShayamthetho sidlulisele umthetho ngo-2010, futhi kwaze kwafika ngo-2014 ukuthi bayisebenzise. Umthetho unikeze bonke abanikazi bebhizinisi isikhathi sokuguquka kweminyaka emithathu kuze kufike ngoJulayi 2017. Kwakuyisikhathi esanele kubo bonke abathengisi be-intanethi ukubukeza imikhuba yabo yamanje futhi baqhathanise neziqondiso ezintsha ezisethwe yiHulumeni yaseCanada, noma bathole imvume evamile kubantu bakhonza.
U-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt , uhambisane nesifinyeto salokho okushiwo umthetho omusha, kanye nemiphumela yawo ekuthengiseni inthanethi.
1. Ungalokothi uthumele imilayezo ye-elektroniki kubantu abangabaceli
Umthetho wokulwa nogaxekile uthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo kufanele abantu kanye nezinkampani zithumele noma yimiphi imilayezo ye-imeyli kumakheli e-imeyili, amafoni, ama-akhawunti wezokuxhumana, noma ama-Smartphones ngaphandle kwemvume evela kumnikazi. Ngaphandle uma umamukeli esebambisene nebhizinisi nomthumeli, yonke imininingwane yokuxhumana kufanele ihlanganise nabantu abakhethileyo. Kudinga ukuthi izinkampani ziqede isakhiwo sokwenza uhlu lweposi lokuzenzakalela. Isixazululo singase sibe inkinga uma uhlu lwe-imeyili lithengwa noma lutholakala kumuntu wesithathu, umuntu akanikeze imvume yakhe ecacile ukuba avele ohlwini, futhi uma inkampani ihlulekile ukuqinisekisa ukuthi oxhumana naye usebenza.
2..Ungaguquki noma uthumele umlayezo kanye nedatha yokudlulisela kwenye indawo
Umthetho ubeka ukuthi umuntu angashintsha kuphela ukufika komlayezo we-imeyli uma umamukeli evuma. Enye into eqondakalayo ingasho ukuthi awukwazi ukufaka umuntu wesithathu (egameni lomunye umuntu) ekuthumeleni umyalezo noma ukuphatha noma yikuphi ukuphendula kuwo. Enye incazelo ukuthi lokhu kwakuhloswe ukuvimbela ekuhlaselweni kwe-phishing, noma ukuhlaselwa kwe-imeyli, lapho imilayezo enobungozi imukela khona imiyalezo ngaphambi kokuba ifinyelele abamukeli abahlosiwe ukuze ikwazi ukuphumula ulwazi olubucayi kubo.
3. Ungafaki uhlelo lwekhompyutha kumakhompyutha omunye ngaphandle kolwazi lwabo
Ivimbele izinkampani ekusebenziseni imilayezo ye-imeyli njengezindlela ezingashumeka ngazo futhi zifake izinhlelo kumakhompyutha azo lapho zivula ama-imeyili. Umthetho awuhlukanisi phakathi kwe-spyware, i-malware, noma isofthiwe esemthethweni. Ngakho-ke, bonke abathumeli kumele benze inhloso yesofthiwe kufakwe kule milayezo eyaziwa kumamukeli.
4. Yeka ukusebenzisa izethulo ezidukisayo ku-intanethi, noma noma yikuphi ukukhuthazwa
Umthetho usekela ukuthembeka kuwo wonke amasu wokuthengisa. Izikhangiso ezidukisayo noma lezo eziqukethe ulwazi lwamanga ziphulwa ngokuqondile komthetho.
5. Ungaqoqi noma yimaphi amakheli noma ulwazi lomuntu siqu ngaphandle kwemvume
Ukusebenzisa inqubo ezenzakalelayo ukuqoqa imininingwane yomuntu kuwukuphulwa ngokuqondile kweCriminal Criminal of Canada. Abakwazi futhi ukusebenzisa noma yiliphi amakheli aqoqwe besebenzisa indlela yokuthumela imilayezo ye-elekthronikhi ehloselwe ukuyidayisa.
6. Yiba nendlela yokubonisa imvume kanye nendlela yokuphuma koxhumana nabo
Umthetho uphinde unikeze abathengisi ithuba lokulondoloza imikhankaso yabo ye-imeyili ngokufaka ubufakazi bokuthi othile uvumelekile ukuba abe ohlwini lwabo lokuposa.
Ukuklanywa komthetho omusha kwakuhloswe ukukhumbuza abathengisi ukuthi kumele baphathe abamukeli ngenhlonipho enkulu. Njengoba ukuhambisa okukhulu kwemilayezo ye-imeyili ithunyelwe nsuku zonke, iCanada ifuna kuphela ukuthi labo abafanele kakhulu bafinyelele abamukeli babo Source .